အိုလမာ အစ္စလာမ် မှ အစ္စလာမ် အတွက် ခုခံရေး ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး / ဘေရွသ်
ဇှနျ ၈, ၂၀၁၅ - ၁၁:၅၃ ညနေ
လက်ဘနွန် နိုင်ငံ ဘေရွသ် မြို့ တွင် အိုလမာ အစ္စလာမ် မှ အစ္စလာမ် အတွက် ခုခံရေး ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပါတယ် ။ မဂ်ျမယေဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေမှူးချုပ် အာယာ သွလ္လာဟ် အခ်သရီ လည်း ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနေရာယူခဲ့ပါတယ်။
မရ်ဟွန်မ် အာယာသွလ္လာဟ် အာစေဖီ အား IS အကြမ်းဖက် များ ကို ခုခံ တိုက်နေသူများ အကြား တွေ့ရစဉ်
ဇှနျ ၅, ၂၀၁၅ - ၁၀:၃၃ ညနေ
အီရတ် နိုင်ငံ နဂျဖ်ဖေအရှရဖ် မြို့ တွင် ရဲဟ်ဗရ် အင်ကေလာဗ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ၏ ကိုယ်စားလှယ်တော် နှင့် မဂ်ျ မယေဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ထိပ်တန်း အဖွဲ့ဝင် အာယာသွလ္လာဟ် မိုဟမ္မဒ်မဲဟ်ဒီအာစေဖီအားISအကြမ်းဖက်များကိုခုခံတိုက်နေသူများအကြား တွေ့ရစဉ် ၏ပုံရိပ် တစ်ချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အာယာသွလ္လာဟ် အာစေဖီ ၏ ဈာပန အစီ အစဉ် / ကွမ်း မြို့
ဇှနျ ၅, ၂၀၁၅ - ၁၀:၂၀ ညနေ
အာယာသွလ္လာဟ် အာစေဖီ ၏ ဈာပန အစီ အစဉ် ကိုယနေ့ သောကြာနမာဇ် အပြီး ထောင်ပေါင်းများစွာသော မိုမေနီ များ ၊အိုလမာ စသည်တို့ ပါဝင် တက်ရောက်ပြီး ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမို ရှီးရာဇီး မှ ဦးဆောင် ဂျနာဇာ နမာဇ် ဖတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အာယာသွလ္လာဟ် အာစေဖီ ၏ ဘဝ ဆိုင်ရာ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံများ
အာယာသွလ္လာဟ် အာစေဖီ ၏ ဘဝ ဆိုင်ရာ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံများ တစ်ချို့ ကို ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အေမာမ် စဂျာဒ် (အ.စ) ညီလာခံ အတွက် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ / ဓာတ်ပုံ သတင်း
ဧပွီ ၂၄, ၂၀၁၅ - ၁၁:၃၄ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အေမာမ် စဂျာဒ် (အ.စ) ညီလာခံ အတွက် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ကို မနေ့ က ဧပြီလ ၂၃ရက်နေ့ တွင် မဂ်ျမယေဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) အဖွဲ့ ၏ ဦးစီးမှူး ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါတယ် ။
အာယာသွလ္လာဟ် ဟာဒဝီ တီဟီရန်နီ
ဆော်ဒီအာရေဗျ မငြိမ်မသက်မှု ကိုပြုသူ / မက္ကာဟ်နှင့်မဒီနာ ဆော်ဒီ ပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ် /
ဧပွီ ၁၅, ၂၀၁၅ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
မဂ်ျ မယေဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ထိပ်တန်း အဖွဲ့ဝင် အာယာသွလ္လာဟ် ဟာဒဝီ တီဟီရန်နီ မှအကယ်၍ ဆော်ဒီ အစိုးရ အနေဖြင့် အကီဒါပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံ မှု(မွတ်စလင်မ်များလွတ်လပ်စွာ မိမိတို့ ဖေရ်ကေ အရ အကီဒါ ထားရှိမှု အပေါ်လုံခြုံမှုပေးနိုင်ရေး) ၊ ဇေယာရသ် ပြုရန် လာရောက်သူများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ နှင့် အသက် လုံခြုံမှု အတွက် စီစဉ်နိုင်စွမ်း မရှိပါက ဟရမ်မိုင်းနေရှရီဖိုင်း ရေး စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်စီကို မဖြစ် မနေ ဖွဲ့စည်းသင့်ကြောင်း ၊ထို့မှသာ အလ္လာဟ် အသျှင်မြတ် အိမ်တော်လာရောက်သူများ ၏လုံခြုံရေး စိတ်ချရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မဂ်ျ မယေဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ထိပ်တန်းအဖွဲ့ဝင်များ အီရတ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးနှင့်တွေ့ဆုံ / ဓာတ်ပုံများ
ဧပွီ ၁၂, ၂၀၁၅ - ၉:၀၂ နံနကျ
မဂ်ျ မယေဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ထိပ်တန်းအဖွဲ့ဝင်များမှ အီရတ် နိုင်ငံခရီးစဉ် တွင် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အီဗရာဟီးမ် အလ်ဂျအ်ဖရီ နှင့်တွေ့ဆုံပြီး အရေးကြီးစကားများပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
မဂ်ျမယေဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ ထိပ်တန်း အဖွဲ့ဝင်များ မှ မရ်ဟွမ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် ဗဲဟ်ရွလ်အူလွန်မ် ၏ ကျန်းမာရေး မေးမြန်းခဲ့
ဧပွီ ၈, ၂၀၁၅ - ၁၀:၄၄ နံနကျ
မဂ်ျမယေဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ ထိပ်တန်း အဖွဲ့ဝင်များ မှ မရ်ဟွမ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် ဆရက်ဒ် မိုဟမ္မဒ် ဗဲဟ်ရွလ်အူလွန်မ် ၏ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို မကြာသေးမီ မိမိတို့၏ အီရတ် ခရီး စဉ်တွင် ၎င်း၏ နေအိမ်သို့ သွားရောက်ပြီး မေးမြန်းအားပေးခဲ့ ကြပါတယ်။ သို့သော် အာယာသွလ္လာဟ်ကြီးအနေဖြင့် မနေ့က ဧပြီလ ၇ရက်နေ့ တွေ အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် ၏ အမြတ်တော်မြတ် ကို ခံယူသွား ပြီးဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းနည်း စွာ သတင်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဧပွီ ၈, ၂၀၁၅ - ၉:၂၅ နံနကျ
ဧပြီလ ၅ရက် နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် မဂ်ျမယေဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ ထိပ်တန်း တာဝန်ခံများ အား ပြည်ထောင်စု အစ္စလာမ်မစ် အီရန်သမ္မတ H.I.Dr ဟစန်ရူဟာနီမှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြိုဆိုပြီး တွေ့ဆုံ စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။
မဂ်ျမယေဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် နှင့် လာဟိုရ် မြို့ ဂျွန်မာ နမာဇ်
ဖဖေျောဝါရီ ၁၄, ၂၀၁၅ - ၈:၁၁ နံနကျ
မဂ်ျမယေဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဟစန်အခ်သရီ အနေဖြင့် လာဟိုရ် မြို့ ရှိ (အလ်မွန်တဇဲရ် ) ဗလီတွင် ဂျွန်မာ နမာဇ်လာရောက် ဝတ်ပြုသူများ အကြားတွင် အရေးကြီး တရားများဟောကြားခဲ့သည့် ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါသည်။
(( ရှီအာ အခြေအနေ အထောက်အကူ ပြု သေနင်္ဂဗျူဟာ အား စိစစ်ရေး )) ခေါင်းစဉ်အမည် ဖြင့် ဆွေးနွေး ဖလှယ်ပွဲ
ဇနျနဝါရီ ၂၉, ၂၀၁၅ - ၁၀:၃၅ ညနေ
“ရှီအာ အခြေအနေ အထောက်အကူ ပြု သေနင်္ဂဗျူဟာ အား စိစစ်ရေး ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အထူး ဆွေးနွေး ဖလှယ်ပွဲ အားဇန်နဝါရီလ (၂၂) ရက်နေ့ က မဂ်ျမယေဂျဟာနီ အဲလ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ တာဝန်ရှိ အကြီးအကဲများမှ တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဒေါက်တာမိုဟမ္မဒ် အစ္စမာအီလီ နဗါသီရန် ၏ ကြီးကြပ်မှု ဖြင့် သဗ်လီးဂါသ်သေ အစ္စလာမ်မီ ၊ဟောင်စေအေလ်မီယေကွမ်း ၊ရုံး ၏ ဆွေးနွေးပွဲ ခန်းမ တွင် ဒေသစံတော်ချိန် ၂နာရီခွဲ ခန့် တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
အေမာမ် ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ) ရောင်ဇာတော် ၏ ရှေ့ ဆောင် ဆရာတော်
ကရ်ဗလာ မြို့ သူ မြို့ သားတွေ ကို ကယ်တင်ခဲ့တယ်လို့ ရဲဟ်ဗရ် ကိုပြောပေးပါ …
ဇနျနဝါရီ ၇, ၂၀၁၅ - ၁၂:၃၃ ညနေ
အေမာမ် ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ) ရောင်ဇာတော် ၏ ရှေ့ ဆောင် ဆရာတော် အာလင်မ်ပညာရှင် ကြီးတစ်ပါး မှ ဟွဂ်ျဂျသွလ် အစ္စလာမ်အခ်သရ် ရီ နှင့်စကား လက် ဆုံပြော ချိန်တွင် ပြောကြားလေ၏ ။ကျွန်တော် လူကြီးမင်းကို မေတ္တာရပ်ခံ ချင်တာကတော့ အီရတ် ရှိ ရှီအာများ နှင့် ကရ်ဗလာ မြို့ သူ မြို့ သားများဖက်မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ရဲဟ်ဗရ် ကို အထူး ကျေးဇူးတင် ရှိ ကြောင်း ၊ ရဲဟ်ဗရ် အနေဖြင့် အီရတ်နှင့် ကရ်ဗလာ တွင် သိန်းပေါင်း များသော အသက်များ ဝယ်ယူထားပြီး (ကယ်တင်ထားပြီး) ဖြစ်ကြောင်း ၊ရဲဟ်ဗရ် အင်ကေလာဗ် အနေဖြင့် သိန်းပေါင်းများစွာ ကို မိမိ အနီးအနားတွင် စုစည်း ထားနိုင်ပြီး … ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
စစ်ဗ်သေ(န)နဘီ (အ.စ) ညီလာခံ အတွက် ညီလာခံ ကျင်းပရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ လူကြီးများနှင့် အာယာသွလ္လာဟ် အလီဝီတွေ့ဆုံ
ဇှနျ ၁၇, ၂၀၁၄ - ၁၂:၁၉ နံနကျ
စစ်ဗ်သေ(န)နဘီ (အ.စ) ညီလာခံ အတွက် ညီလာခံ ကျင်းပရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ မဂ်ျမယေဂျဟာနီ အဲလ်လေ့ဘိုက်သ် (အ.စ) ၏ လူကြီးများနှင့် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် အလီဝီ တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မဲဟ်ဝီးယသ် ဒေါက်တာများ ညီလာခံ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား
ဇှနျ ၁၃, ၂၀၁၄ - ၇:၃၂ နံနကျ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မဲဟ်ဝီးယသ် ဒေါက်တာများ ညီလာခံ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ၏ပုံရိပ်များ နှင့် ဆုများ ချီးမြှင့်နေသည့်ပုံရိပ်များဖြစ်ပါသည်။
ရဲဟ်ဗရ် အင်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီအား အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ ၂၅နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား
ဇှနျ ၅, ၂၀၁၄ - ၅:၁၅ ညနေ
ရဲဟ်ဗရ် အင်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီအား အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ ၂၅နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား တွင် တွေ့ရစဉ်ပုံရိပ်များဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာမှ အေမာမ်ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏အချစ်တော် အမြောက်အများ တက်ရောပ်နေရာယူခဲ့ကြပါသည်။
အီရန်နိုင်ငံ မဂ်ျမယေဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်သ် (အ.စ) မှ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် စာအုပ်(နမာဇ် အကြောင်း သိကောင်းစရာများ)
ဧပွီ ၂၆, ၂၀၁၄ - ၆:၄၂ ညနေ
ဤစာအုပ်၌ဘာသာပြန်ဆိုသူ မီရ်ဇာ ဂိုလာမ်အဘာစ် သည် မကာမေမိုအ်ဇမ်မေရဲဟ်ဗဲရ်ရီ ဟဇရတ်အာယာသွလ်လ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်အလီ ခါမေနအီ(ဟ.လ) ၏ နမာဇ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မိန့်ခွန်းကို ၊နမာဇ်အကြောင်းကိုဘာသာပြန်တင်ပြထားပြီးအကျဉ်း ဖော်ပြထားပါသည်။
အီရန်နိုင်ငံ မဂ်ျမယေဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်သ် (အ.စ) မှ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် စာအုပ်(နောက်ဆုံးအေမာမ် အေမာမ်ဇမန်(အ.စ) ၏ ဘဝ သမိုင်း)
ဧပွီ ၂၅, ၂၀၁၄ - ၈:၄၀ နံနကျ
ဤဘာသာပြန်စာအုပ်၌ကျက်သရေမင်္ဂလာ အပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသည် အေမာမ်ဇမန်(အ.ဂျ) ဘဝသ မိုင်းတစိတ်တဒေသကိုမီးရှူး သန့်စင်ဖွားမြင်တော်မူချိန်မှ အကွယ်၌ကြွမြန်းသွားချိန်အထိကိုအတို ချုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုနောက်အေမာမ်(အ.ဂျ)အကွယ်၌ရှိနေစဉ် ရှီအာများတာဝန်ဝတ္တရားနှင့် ဂျန်မ်ကရန်မစ်ဂျစ်ဒ် သမိုင်းအကျဉ်း ကို ဖော်ပြထားပါသည်။
မဂ်ျမာအ်ယေ ဂျဟာနီ အဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) ၏တာဝန်ရှိလူကြီးများနှင့် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဂျဝါဒ်အာမိုလီ တွေ့ဆုံ
((တရားမျှတစွာ အဆုံးအဖြတ်ပေးပါ ။ အို ! မိတ်ဆွေ)) မြန်မာ ဘာသာပြန် ထွက်ရှိ
စကျတငျဘာ ၂၉, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
မဂ်ျမာယေဂျဟာနီအဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) တီဟီရန်၏ မိန်းမ နှင့်ကလေးများ ဌာန နှင့် အန်ဂျွန်မန် အေလ်မီ ဟဇရသ်ဖွာတွေမာ မာစူမာ (စ.အ) မြန်မာ ၊ကွမ်း တို့မှပူပေါင်းပြီး ((တရားမျှတစွာ အဆုံးအဖြတ်ပေးပါ ။ အို ! မိတ်ဆွေ))အမည်ဖြင့် မြန်မာ ဘာသာပြန် စာအုပ် ထွက်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ ရှီအာ များ နေထိုင်ရာ မြို့များတွင် အခမဲ့ ဓမ္မဒါနအဖြစ် အုပ်ရေ ၁၀၀ ထုတ်ဝေလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
သောကြာ ခွသ်ဗာမတိုင်မည် မဂ်ျမာအ် ယေဂျဟာနီ အဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ တရား / ဓာတ်ပုံ သတင်း
မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) နှင့် အေမာမ်ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ်(အ.စ) တို့၏မွေးနေ့ အခမ်းအနား နှင့် ဟောပြောပွဲ
မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) နှင့် အေမာမ်ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ်(အ.စ) တို့၏ မီးရှူးသန့်ဝင် ဖွားမြင်တော်မူသည့် အချိန် အခါနှင့်အညီ (မီစာက် ဗါ ပရန်းမ်ဗရ်ရေ ရဟ်မဒ် ဝါ အဒါလာဒ်) အမည်ဖြင့်ဟောပြောပွဲအားပြည်ထောင်စုအစ္စလာမ်မစ်အီရန်နိုင်ငံ၏ ကွမ်းမြို့တော် ရှိ မဂ်ျမာအ် ယေ ဂျဟာနီ အဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ)တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ဟွဂ်ျဂျသွလ်အစ္စလာမ်ဆရက်နဝါဗ်မှ သက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောခဲ့ပါသည်။
မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) ၏ (( ဟိုနာရ် အစ္စလာမ်မီ )) ဆိုဒ်အသစ် အား ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ တွင် တီဟီရန်မြို့ရှိ ၁၉ ကြိမ်ြေ
နိုဝငျဘာ ၂, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ